Kubonakale imbuzi ihamba iqondile ngemilenze yayo yangemuva | Scrolla Izindaba
Kubonakale imbuzi ihamba iqondile ngemilenze yayo yangemuva
Imbuzi ezweni laseNdiya imangaze izakhamuzi ngesikhathi beyibona ihamba izulazula edolobheni ngemilenze yayo yangemuva.
Ividiyo efakwe ku-Twitter ikhombise ukuthi, le mbuzi ihamba iqonde cishe amamitha ayishumi.
Kusukela lapho, le mbuzi ibe yinto eheha kakhulu njengoba abantu abavela nxazonke bathuthele e-Telwara, e-Bihar ukuzobona lesi smanga.
Izimbuzi azaziwa kakhulu ngokuhamba ngemilenze yazo yangemuva, ngakho-ke le mbuzi isizakhele udumo.
Iseluleko esisodwa esihle esingasisho kule mbuzi ukuthi:
Uma ungafuni ukuba isobho, qhubeka uhambe.